मुख्यमन्त्रीका लागि आज प्रदेश १ मा एमाले संसदीय दलको निर्वाचन, को कहाँ बसेर सक्रिय ?
प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीको टुंगो शुक्रबार लाग्दै छ । सकेसम्म सर्वसम्मत, नभए मतदान प्रक्रियाबाट एमालेले संसदीय दलको नेता टुंगो लगाउने भएको छ । त्यसका लागि शुक्रबार ११ बजे विराटनगरस्थित प्रदेश सभा भवनमा दलको बैठक बोलाइएको छ । बहुमत प्राप्त दल एमालेको संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का छ । एमाले दलको नेता बन्न सचिव भीम आचार्य र पोलिटब्युरो सदस्य शेरधन राई मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन् । केन्द्रीय सदस्य जीवन घिमिरेले दलको नेता बन्न आकांक्षा देखाए पनि उनी अन्तिममा दौडबाट बाहिरिने एमाले नेताहरूको विश्लेषण छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
संसदीय दलको नेताका अर्का आकांक्षी जीवन घिमिरे माधव नेपाल पक्षकै हुन् । उनलाई सहमतिमा ब्याक गराएर सचिव भीम आचार्यलाई सघाउन नेपाल पक्षले आग्रह गरिरहेको छ । नेपाल पक्षका एक नेताका अनुसार घिमिरे पछि हटिसकेका छन् । शुक्रबार मनोनयन दर्ताको समयसम्म घिमिरेले खुलेर आचार्यको पक्षमा मतदान गर्ने र आफ्नो उम्मेदवारी नदिने एमाले स्रोतको दाबी छ । उता, संस्थापन पक्षले भने सहमति शेरधनको नाममा गर्ने र नभए त्रिपक्षीय भिडन्त गराउने दाउमा छ । जीवन घिमिरेले समेत उम्मेदवारी दिए आचार्यको पक्षमा कम मत जाने भन्दै संस्थापन पक्षले घिमिरेलाई अन्तिम अवस्थासम्म प्रतिस्पर्धा गर्न सुझाइरहेको स्रोतले बतायो ।
प्रदेश १ इन्चार्ज गोपाल किरातीले आफूले माओवादी छाडिनसकेको, मात्र फरक विचार राखेकाले आफू जिम्मेवारीसहित पार्टीभित्रै रहेको बताए । उनले माओवादीले पहिचानको राजनीतिलाई छाडेर एमालेमा एकीकृत भएमा आफू माओेवादी छाड्न बाध्य हुने बताए । ‘पार्टीले पहिचानको मुद्दा नछाडेमा म पनि पार्टीसँगै रहन्छु, छाड्यो भने म पनि अलग हुन्छु,’ उनले भने ।
प्रकाशित : शुक्रबार, माघ २६, २०७४०८:२१
आज जनै पूर्णिमा : किन लगाउने जनै ? के-के छन् यसका शास्त्रीय तथा वैज्ञानिक महत्व ?
महिलाको ‘मेकअप’विरुद्ध महिलानै आन्दोलित भएपछि…
कारागारमा महिलाको बिजोग, आमासँगै छोरी पनि जेलमा
वाइडबडी जहाज खरिदमा जिम्मेवारहरुको भागाभाग ! यसरी पन्छिदै छन् जिम्मेवार व्यक्तिहरु !
१२ वर्षीया बालिका बलात्कारी जोगाउन सांसदको घरमा पञ्चायती, घटना ढाकछोप गर्न १ लाख २० हजार दिन खोजिएको खुलासा